Chirwere cheCrohn muvana nevechiri kuyaruka | Bezzia
Chirwere cheCrohn muvana nevechiri kuyaruka
Maria Jose Roldan | 28/08/2021 13:48 | Vechiduku, Zvemwanakomana wako
Zvirwere zvinokonzerwa mudumbu uye ura ivo vari kuwedzera kuwanda uye kujairika pakati pevana nevechiri kuyaruka. Iyo data inoratidza kuti gore rega rega vana vazhinji vanotambura nemhando yezvirwere izvi, kusanganisira chirwere cheCrohn.
Iyi mhando yemamiriro anokanganisa gadziriro yekugaya, Inosanganisira kuzvimba kwakasimba muchikamu chekupedzisira chemuviri mudiki uye kutanga kweiyo hombe. Muchinyorwa chinotevera tichakuratidza kuti rudzi urwu rwechirwere runokanganisa sei vana nevechidiki huwandu uye izvo vabereki zvavanofanira kuita nezvazvo.
1 Zvinokonzera chirwere cheCrohn muvana
2 Chirwere cheCrohn chinoratidza sei
3 Zvinogona Kuita Vabereki Nezve Chirwere chaCrohn
Zvinokonzera chirwere cheCrohn muvana
Kusvikira nhasi, hapana chakakonzera chikonzero chekuti mwana atambure kubva pakurwara kwemukati. Pane zvinhu zvakasiyana zvakaita sekudya kana hutsanana hunogona kukonzeresa vana kuti vakure chirwere chakadai, nekuda kwekudonha mukuzvidzivirira kwavo. Inogona zvakare kuve nekuda kweiyo genetic chikonzero uye nhoroondo yemhuri yemwana.
Chirwere cheCrohn chinoratidza sei
Pane zviratidzo zvinoverengeka zvinogona kuratidza kuti mwana ane chirwere cheCrohn:
Dhairrhea ndechimwe chezviratidzo zvakajairika zverudzi urwu rwemamiriro. Kana chirwere ichi chichiperekedzwa neropa, zvinokwanisika kuti kune kuzvimba munzvimbo yekoloni. Kana huwandu hwemanyoka hwakanyanya kukosha, zvakajairika kuti kuzvimba kuitike mudumbu diki.
Chimwe chezviratidzo zvakajeka zvechirwere ichi ndiwo marwadzo munzvimbo yese yemudumbu.
Yakakwira feverish nyika.
Kusava nechido icho chinoperekedzwa ne rakakosha uremu.
Kushaya simba uye kuneta panguva dzose dzezuva.
Chitarisiko maronda uye fistula.
Joint matambudziko kukwanisa kusvika kukonzera arthritis.
Zvinogona Kuita Vabereki Nezve Chirwere chaCrohn
Nehurombo irwo rudzi rwechirwere chisingaperi uye hapana mushonga. Mwana anofanirwa kurarama hupenyu hwake hwese nezvirwere zvemudumbu. Kuchave nenguva apo izvo zviratidzo zvinozove zvakanyanya kuenzaniswa kana ichienzaniswa nedzimwe nguva apo zviratidzo zvacho zvanyanyisa. Kurapa kunoteverwa kunofanirwa kuve nechinangwa chekudzikisa zviratidzo uye kubatsira mwana kana wechidiki kurarama hupenyu hwakajairika sezvinobvira. Shanduko mukudya kana kutora mimwe mishonga vanogona kubatsira kudzora chirwere chaCrohn.
Muchidimbu, Chirwere chaCrohn chinowanzoitika mukuyaruka kupfuura paudiki,Kunyangwe iyo data inoratidza kuti vana vazhinji uye vazhinji vanotambura nechirwere chakadai. Kana zviri zviratidzo, zvakafanana muvakuru sevana. Kana chirwere ichi chikatambura panguva yekuyaruka, zvinokwanisika kuti chirwere ichi chinoguma chakakanganisa kukura kwakajairika kwemudiki. Nyanzvi dzinonongedzera kukosha kwekuisa mukati mevana kubva pazera diki, tsika dzakanaka dzekudya kuvadzivirira kubva mukukura kwechimiro chemukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Vechiduku » Chirwere cheCrohn muvana nevechiri kuyaruka
Zvikafu zvakakosha kurwisa kuneta
Iwo anochengetedza machira zvitupa aunofanira kuziva